Apple inotangisa watchOS 7.5 yevashandisi vese | IPhone nhau
Nhasi izuva rekuvandudza mune Apple zvakasikwa. Midziyo yese yekambani ichangogamuchira vhezheni itsva ye firmware yavo, uye pakati pavo iyo WatchOS 7.5 yeApple Tarisa.
Kwaingova nemwedzi chete kubva iko kwekupedzisira Apple Watch software kugadzirisa, asi izvo hazviite kuti zvive zvishoma kukosha. Inosanganisira dzimwe dzakakurumbira nhau kune vashandisi. Ngatione kuti ndedzipi shanduko dzainotipa.
Apple ichangoburitsa watchOS 7.5, yechishanu hombe kuvandudza kune iyoOSOS 7 inoshanda sisitimu kubvira payakaburitswa munaGunyana 2020. WatchOS 7.5 Iyo inouya mwedzi mushure mekuburitswa kwewatchOS 7.4, chiitiko chakawedzera kuvhura iyo iPhone kubva kuApple Watch paunenge wakapfeka mask uye zvimwe zvakakurumbira maficha.
Iyo watchOS 7.5 yekuvandudza inogona kuburitswa senguva dzose mahara kuburikidza neyakavimbika Apple Watch app pane iyo iPhone nekuenda kuGeneral> Software Gadziriso. Kuisa software nyowani, iyo Apple Watch inoda kuve neinosvika makumi mashanu muzana bhatiri, inoda kuiswa pajaja, uye inofanirwa kunge iri mukati meiyo iPhone - bhizinesi senguva dzose, huya.
watchOS 7.5 inosvitsa rutsigiro rwe Apple Kadhi Mhuri uye zvemukati kunyorera muPodcasts app. MuMalaysia nePeru, gonesa iyo ECG app uye zvisina kujairika chiyero chemwoyo.
Izvi zvinoreva kuti kubva zvino zvichienda mberi, vashandisi vane Apple Kadhi vanozokwanisa kuigovana nenhengo dzemhuri yavo. (ine njodzi yakadii…). Isu tinogona zvakare kunyorera kune akabhadharwa maPodcast.
Iyo yekuvandudza inosanganisirawo maviri matsva Kuzvikudza kumeso izvo zvakagadzirirwa kuperekedza Pride 2021 mabhendi ayo Apple anotangisa nhasi. Pane zviso zviviri zvitsva zvekurangarira mwedzi wekuzvikudza we LGTBIQ + pamwe chete.
Zvakare, senguva dzose, mushanduro nyowani yewatchOS pane akateedzana emukati ekuchengetedza zvigadziriso zvisingaonekwe nemushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa watchOS 7.5 yevashandisi vese
uye kuMexico Kana ECG. 🙁
Iko kushupika kweApple uye bhodhi revatungamiriri vane kudada kweungochani, tese tinoziva gumbo ravanokamhina, havachabate nechinhu chimwe chete zvakare.
Sekureva kwemukuru weApple, iyo Siri Remote nyowani haidi kuve mune yekutsvaga app nekuti hatizoirasa